Umhla My Pet » Indlela Gcina Ulwalamano Lwanelisayo
ukubuyekezwa: Sep. 25 2020 | 3 min ukufunda
izibini abaninzi bayazi ukuba sele: ulwalamano obanelisayo kufuna ixesha elininzi notyalo amandla. Nangona abanye bafunda ngendlela enzima, abanye ndaqonda ukusuka kwasekuqaleni ukuba umntu abe nolwalamano obanelisayo ngaphandle ngoxolo isiqu yokuqala zonke. Ukuba Sijonge ulwalamano lwakho kwaye uziva awoneliseki ngokugqibeleleyo yindlela ngoku, ufanele wazi ukuba sisiqalo esilungileyo ekuphuculeni na ngokwakho. ukukhula Self nophuhliso buqu zizitshixo kuphela kulonwabo yakho, kodwa ubomi mnandi nobanelisayo njengoko isibini. Awukwazi uguqule ngokwakho okanye ubudlelwane yakho kwisifudumeze yesibini, kodwa apha kukho iingongoma ukuba siqwalasele:
1. Ulonwabo livela ngaphakathi
Oko kuthethwayo, ufanele wazi ukuba injongo kuphela iqabane lakho ebomini ukuba kukwenza wonwabe xa ahlale angenzi nto ngalo. Ilindele ulonwabo ninkqonkqoze ngokulula emnyango kwakho kunokuba bubudenge. A liseka ibandakanya abantu ababini ukuhlonela bayakhathalelana. iqabane ngalinye thabatha into bubudlelwane, kodwa izisa into kuwo. Nangona uthando kuba yimfama, olungumangaliso, awuluthe ukuba singazicingeli. ngoko ke, musa ukuba enye ukuze wonwabe. Imali ngokwakho; bafunde ukonwaba ukuze negalelo kulonwabo isibini wakho ngendlela.
2. Susa umqadi kwelakho iliso
Kukho intetho endala usifundisa ukuba wukhuphe kuqala umqadi lowo esweni yethu, Ukuba sifuna ukuba akwazi ukubona ngokucacileyo koko kuphela ndisikhuphe isibi eso esweni somnye. Ithetha ntoni le nto? Khangela lokuqala ngokwakho esipilini, ukubona kwaye zama ukusebenza iimpazamo zakho phambi wayebonisa misshapes iqabane lakho. Ngaphandle ukuwa kwezinye ngokugqithileyo nabemkayo anokuzisebenzisela kugwetywa, wonqanyulwa iqabane lakho ezinye odangeleyo, uyeke ukubukela / nayo yonke ongatshatanga ngokusebenzisa iglasi ekhulisayo, kwaye uzame ukuqonda izenzo zabo endaweni simgxeke. ixesha elizayo ukuba nkqu ungquzulwano incinane isibini, endaweni yokuzama ukubeka ityala komnye umntu, zibuze ukuba wenza into engalunganga. Zama ukufumana iindlela zokuphepha ungquzulwano, kwaye, xa kuvela ingxabano enjalo, cinga isisombululo ukusombulula ngoxolo.
3. Hlala uzolile yakho
Ngoko ubudlelwane abaninzi aphambuka kuphela kuba amaqabane amabini nesimo sengqondo legorha. A liseka asinto ledabi. Wena Akuyomfuneko ukuba ukuhlasela iqabane lakho okanye ubale uloyiso lwakho amanqaku aphezulu akuyi kukunceda baziva bonwabile. kunokuba, zama ukugcina uzolile kwaye sibe nomonde kunye neqabane lakho. Ucinga ukuba iqabane lakho ukuba utshaba lwakho, kwaye xa ufuna ungakhwazi, nditsal 'umoya kwaye zinjalonje. Linda de uyakwazi ukuthetha ngapha cwaka, yaye kungekudala uya kuyibona imiphumo.
4. Ndikuseka okunempilo kulwalamano lwakho
Kanye indlu eqinileyo lwakhelwe iziseko eziluqilima, ubudlelwane obanelisayo lwakhelwe ezisempilweni. Oku kuthetha ukuba kufuneka unyaniseke kwiqabane lakho, okona kubalulekileyo, ngokwakho ukusuka ekuqaleni. Kutheni usiya umzamo omkhulu ukuze ukufihla iimpazamo zakho xa uceba ikamva kunye? Omnye ekugqibeleni iya uphawule iingongoma zakho buthathaka. Ngaba wakha wacinga ukuba iqabane lakho okunene nothando icala ukuba ucinge namakhwiniba?
5. Musa ukunikezela amaphupha akho
Ùve ngabani ukuba ukuze sibe nolwalamano onenjongo yonwaba kufuneka azinikele amaphupha akho? Ukuba ucinga oku kusemphefumlweni iqabane lakho, kukho iindlela ezimbini: nokuba umelwe yena / engalunganga yakhe, okanye ukuba akukho OMNYE. Nam ukuzicingela, okanye akazicingeli zenza sengqondo kunene ukuba nolwalamano olu-. Okuphikisanayo, usempilweni uthando intsebenziswano kuthetha ukuba inkxaso ezimbini sakhuthazana ukuba balandele amaphupha abo. Ukuba ugqiba ukuba iminqweno yakho nosukelo ayibalulekanga, kungekudala uya bakhathazekile kwaye enganelisekanga. Ingaba le ndawo ufuna ubuhlobo benu ukuba isihloko?